BATIR – Kaonferansa iraisam-pirenena ara-virtoaly ho an’ny mpitarika
Famerenana na “replay” ilay Kaonferansa
Zarao amina Pastora namana
Kaonferansa iraisam-pirenena ara-virtoaly ho an’ny mpitarika
Moa ve mpitarika izay voakasika amin’ny toerana misy ny fiangonana ankehitriny isika? Manana am-po ny fitomboana ara-panahin’ireo vahoakan’Andriamanitra ve isika ? Te hanorina amin’ny alalan’ny hafatra izay notorian’ireo apostoly voalohany ve isika ?
Ny tanjon’ity kaonferansa ity dia ho fampitaovana an’ireo mpitandrina sy mpanompon’Andriamanitra mba hanompon’izy ireo an’i Jesosy tsaratsara kokoa, ao anatin’ny fahamarinana ara-baiboly sy miaraka amin’ny herin’ny Fanahy Masina. Hasaina ny vadinao mba hanaraka ny kaonferansa miaraka aminao. Amin’izao vanin’andro farany izao, ny Fanahin’Andriamanitra dia mitady an’ireo olona izay nofidian’Andriamanitra izy tenany ihany eny anivon’izao tontolo izao ka hiara hiasa Aminy, ary handray anjara amin’ilay fanorenana lehibe ny Fiangonan’i Jesosy Kristy.
Mpitoriteny ao anatin’ilay kaonferansa
Ny Pasteur Miki Hardy
Nihaona tamin’i Jesosy i Miki Hardy ka nateraka indray ny taona 1977. Nahatsapa ny antson’Andriamanitra teo no eo ihany izy mba hanompo azy. Nandeha nandrato fianarana Baiboly tany Afrika Atsimo, nandray faminaniana maro avy amin’ireo mpanompon’Andriamanitra avy any an-toerana izay tsy nahalala azy akory izy, nanamafy an’ilay antso izay tsapany hatramin’ny fotoana niovany fo.
Fotoana kely taty aoriana, nandalo vanim-potoana sarotra i Miki teo anivon’ny asa fanompoany sy ny fiainany manokana. Io vanim-potoana io no fahafahana nahafahan’ny Tompo tena hiasa lalina ao anatin’ny fony ka nanambarany azy ny hafatry ny hazo fijalian’i Jesosy.
Io hafatra io, dia tsy niala tao aminy intsony ka io niandohan’ny famoronana ny CTMI (Church Team Ministries International) tamin’ny taona 2000, fikambanana iray izay manana tanjona dia ny hampitaovana sy hampiorina ireo mpitarika sy ny fiangonana any Afrika ary any an-kafa ihany koa amin’ny alalan’ny hafatra apostolika ny hazo fijaliana. Mba ahatanteraka an’io vina io, ny CTMI dia mikarakara kaonferansa sy hetsika maro, mandefa ireo hafany amin’ny fahitalavitra, ny onjam-peo, amin’ny aterineto sy ireo fitaovana maro samihafa, manerana ny Afrika sy izao tontolo izao.
CTMI dia tambajotra kristiana tsy miankina, niforona ny taona 2001 tamin’ny alalana ekipa ana mpitarika maro avy amina firenena samihafa, niombona noho ny hafatry ny hazo fijaliana sy ny asa ataon’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’izy ireo. Ny vinan’ny CTMI dia ny hampitaovana sy hampiorina ireo mpitarika sy ny fiangonana manerana ny Afrika sy any an-kafa amin’ny alalan’ny hafatra apostolika ny hazo fijaliana. www.ctmi.org